सवा २ करोडमा पोखरामा पहिलो आकाशेपुल बन्ने – Online Annapurna
सवा २ करोडमा पोखरामा पहिलो आकाशेपुल बन्ने
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:३१ December 13, 2019 170 Views
सन्देश श्रेष्ठ पोखरा, मंसिर २७ । पर्यटकीय नगरी पोखराको सृजनाचोकमा आकाशेपुल निर्माण हुने भएको छ । पोखराका ब्यस्त चोकहरु मध्येको एक पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित सृजनाचोकमा आकाशे पुल निर्माण हुने भएको हो । मुख्यचोकमाहरुमा बढदो ट्राफिक जामलाई घटाउने उद्धेश्यले पोखरा महानगरपालिकाको २ करोड ३० लाख ११ हजारको लागतमा आकाशे पुल निर्माण गर्न लागेको हो । पुलको शुक्रबार विहान गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शिलान्यास गरे ।
आउँदो चैत मसान्त सम्ममा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित आकाशेपुलको निर्माण कार्य शुरु गरिएको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्वर ८ का वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले जानकारी दिए । चैत मसान्तसम्ममा बनाइसक्ने भनिएपनि साउन २७ गतेसम्म बनाइसक्ने भनी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता छ ।
महानगरपालिकाको २ करोड र स्वः रवीन्द्र अधिकारीले सांसद विकास कोर्षबाट विनियोजित गरेको ५० लाखबाट पुल निर्माण गर्न लागिएको वडाध्यक्ष बरालले बताए । पुल निर्माणको जिम्मा के.एम. जे.बि.एन.एस. पोखराले ठेक्का लिएको छ । पृथ्वीचोकबाट लेकसाइड र विरौटाबाट विन्ध्यबासिनी जोड्ने सृजनाचोकको चारैतिर आकाशेपुल हुनेगरी पुल निर्माण गरिनेछ । पुल स्टील जडित भएकाले निर्माणका लागि समय धेरै नलाग्ने र निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने इन्जिनियर बाबुराम भण्डारीले बताए । पुल निर्माणका लागि गत जेठ ५ गते नै सम्झौता भइसकेको र कम्पनीले आन्तरिक काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
पोखराको सृजनाचोकमा बनाइन लागेको आकाशेपुलको स्केच ।
आकाशे पुल निर्माणपछि पोखराको जाम केहि कम हुने आशा गरिएको छ । सृजनाचोक ब्यस्त चोकहरु मध्येको एक भएकाले यहाँको जामले अन्य चोकहरुमापनि असर पर्ने भएकाले यहाँ आकाशेपुल निर्माण भएपछि अन्य चोकको जामलाईपनि कम गर्न मद्धत पुग्नेछ । यद्वपी सृजनाचोक भन्दा पृथ्वीचोक र सभागृहचोक अझ बढी ब्यस्त हुने भएपनि त्यहाँ अहिलेसम्म आकाशेपुल निर्माण हुन सकेको छैन । सृजनाचोकमा पुल निर्माण सम्पन्न भए यो पोखराको पहिलो आकाशे पुल हुनेछ ।
तीन तहको सरकार मिल्यौं भनेमात्र पोखरा बन्छ
पुल शिलान्यास गदै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासका लागि तीन तहको सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । कुनै एउटा सरकार लागेर मात्रै हुँदैन,‘उनले भने,‘ब्यबस्थित विकासका लागि तीन वटै सरकार बीच सहकार्य हुनुपर्छ, तबमात्र ब्यबस्थित विकास सम्भव छ ।’ उनले पोखराको विकासका लागि पोखरा महानगरपालिका, प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । उनले अबपनि पोखरालाई ब्यबस्थित गरेर विकास गरेनौं भने पोखरा काठमाडौंजस्तै अस्तब्यस्त बन्ने चेतावनी दिए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखराका मुख्य सडकहरुलाई चार लेनको बनाउने योजनामा प्रदेश सरकार लागेको बताए । त्यसका लागि सरकारले यो वर्ष सम्भाब्यता अध्ययन् गर्ने जानकारी दिए । अर्को वर्षकाट चार लेनका सडक निर्माणको काम शुरु हुने उनले बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले वितेको २ वर्ष विकासको जग हाल्ने काम भएको बताउँदै उनले भने,‘अवको तीन वर्षमा विकासको प्रतिफल देखिन्छ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरामा पार्किङको समस्या बढदो रुपमा रहेकाले यसको ब्यबस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । पोखराको पार्किङ ब्यबस्थापनमा नीजि क्षेत्रले हात हाल्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि महानगरपालिकाले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । पोखरामा बहुतले पार्किङ भवन बनाएर पार्किङलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेमा पोखराको पार्किङ ब्यबस्थापन सहजै गर्न सकिने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउन आकाशे पुलले सघाउने बताए । स्मार्ट सिटि रातारात हुनसक्दैन यस्तै यस्तै कामले गरेर बनाउने हो,उनले भने,‘पोखरामा पहिलो आकाशेपुलको शिलान्यास हुनु सकारात्मक छ, यसले स्मार्ट सिटीको आधार तयार गर्छ ।’ उनले अब ट्राफिक लाइट पनि थप्नुपर्ने बताए ।
सांसद विन्दुकुमार थापाले पोखरामा आकाशेपुल निर्माण पहिलो प्रयास भएकाले सबैको सहयोगको आवश्यक्ता रहेको बताए ।पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले पोखरेली जनतालाई महानगर भएको प्रत्याभूति हुनेगरी आफूहरुले काम गरिरहेको बताए ।
पोखराका सडकहरु माग्नेहरुले टालैटालोको लुगा लगाएजस्तो हुन नदिने प्रयास गरिरहेको बताउँ उनले थपे,‘अब कम्तिमा पनि ४÷५ वर्षसम्म नबिग्रनेगरी सडक निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ ।’ उनले पृथ्वीचोकमा अन्डर पास वा फ्लाई ओभर बनाउनेबारे अध्ययन भइरहेको बताए । उनले यहि आर्थिक वर्षभित्र ट्राफिक लाइट राख्ने कामकोपनि शुरुवात गरिसक्ने बताए ।
महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आकाशेपुलको निर्माणसँगै महानगर स्मार्ट सिटी बनाउने अभियानमा अगाडि बढेको बताइन् ।